फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी ३०% बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी ३०% बढ्यो
on: August 19, 2018 लगानी
फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी ३०% बढ्यो
काठमाडौं (अस) । गत असार मसान्तसम्ममा फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी कुल ३० प्रतिशत बढेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरेर चुक्तापूँजी बढाएका हुन् । नेप्सेमा सूचीकृत २७ कम्पनीमध्ये १७ ओटाले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । यीमध्ये पनि ९ ओटा कम्पनी (सेण्ट्रल फाइनान्स, गूडविल फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स, युनाइटेड फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्स)ले राष्ट्र बैङ्कले ताकेको चुक्तापूँजी पुर्‍याएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । पूँजीवृद्धिका लागि प्रोग्रेशिभ फाइनान्स कम्पनीले भदौ ५ गतेदेखि १ बराबर २ दशमलव ८१ (१ः२.८१) अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा गरेको छ । कम्पनीले रू. १ सय अङ्कित दरको ५९ लाख १ हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । यो हकप्रद शेयर जारी भएपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड १ लाख पुग्नेछ ।
सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सले पनि १ बराबर १ दशमलव ६७ अनुपातमा भदौ १ गतेदेखि २५ लाख कित्ता हकप्रद शेयर जारी गरिरहेको छ । यो हकप्रद शेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४० करोड पुग्नेछ । जेबिल्स फाइनान्स कम्पनीले १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरिसकेको छ । कम्पनीले रू. १ सय अङ्कित दरको २३ लाख ११ हजार ६ सय ५० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गरेको हो । यो हकप्रद शेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड ९० लाख पुग्नेछ ।
यसैगरी बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड (साविकको सिनर्जी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड)ले १ बराबर शून्य दशमलव २५ (१ः०.२५) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले विक्री खुला अवधि भदौ ११ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर र भदौ १२ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि थप गरेको छ । बेष्ट फाइनान्स र सिनर्जी फाइनान्सले साउन १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेका हुन् । असार मसान्तसम्ममा बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २९ करोड ७५ लाख छ भने सिनर्जी फाइनान्सको हकप्रद शेयर जारीपछि चुक्तापूँजी रू. ५९ करोड ३० लाख पुग्छ । दुवै कम्पनीको चुक्तापूँजी जोड्दा रू. ८९ करोडभन्दा बढी हुनेछ ।
आव २०७४/७५ को नाफाबाट पोखरा फाइनान्स र आईसीएफसी फाइनान्सले लाभांश वितरणको प्र्रस्ताव गरेका छन् । पोखरा फाइनान्सले ८ दशमलव ६८४ नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, आईसीएफसी फाइनान्सले ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।